"Meles Zenawi Wuxuu Damacsanaa Inuu Midawga Afrika Horgeeyo Qaddiyadda Somaliland, Abiy Axmedna Dhulka Ayuu Dhigay Maqaamka Somaliland" Wasiir Hore Oo Itoobiya Ah - Jigjiga Online
HomeWararka Maanta“Meles Zenawi Wuxuu Damacsanaa Inuu Midawga Afrika Horgeeyo Qaddiyadda Somaliland, Abiy Axmedna Dhulka Ayuu Dhigay Maqaamka Somaliland” Wasiir Hore Oo Itoobiya Ah
“Meles Zenawi Wuxuu Damacsanaa Inuu Midawga Afrika Horgeeyo Qaddiyadda Somaliland, Abiy Axmedna Dhulka Ayuu Dhigay Maqaamka Somaliland” Wasiir Hore Oo Itoobiya Ah
16/06/2020 Mohamed Mohamoud
Getachew Reda ayaa hadda ah Afhayeenka ( Tigray People’s Liberation Front ) ayaa waxa kale oo uu ka mid ahaa shanta nin ee ugu saraysa Golaha Sare ee dawladii Melez Zenawi.Waxa uu ahaa oo kale la Taliyaha Melez Zenawi kana dambeeyey magacaabistii Tedros Adhanom loo magacaabay Wasiirkii Arimaha Dibadda Itoobiya iyo Wasiirka Caafimaadka Itoobiya ka hor inta aanu noqonin Mr.Tedros Adhanom madaxa ( World Health Organization ).
Getachew Reda ayaa isla markaa ahaa Wasiirka Warfaafinta Itoobiya. ( VOA Amharic ) ayaa weydiisay Isniintii,June 15,2020 sababta uu dawladii uu ka tirsanaa ee Melez Zenawi u heshiisiin weyday Somaliland iyo Somalia?
Getachew Reda oo ka jawaabaya su’aashaas ayaa waxa uu yidhi hadalkan hoose:
” Ethiopia waxa Ra’iisal Wasaare ka ah nin aad u degdegaya oo khatar galinaya nabadda Itoobiya iyo wadamada dariskeeda ah. Waxa ka jira qalalaase siyaasadeed gudaha Itoobiya. Waana taas sababta ay isku casishay Afhayeenka Golaha Federaalka Itoobiya Keria Ibrahim.
Abiy Ahmed inta aanu dhexgalin Somaliland iyo Somalia waa in uu usoo jeestaa waaqica ka jira gudaha Itoobiya,iyada oo qalaalaasaha ay ku sii fideen gobolada gudaha Itoobiya taas oo ay sabab u tahay doorashooyinka uu dib u dhigay.
Getachew Reda oo la weydiiyay sababta uu dib ugu dhigay doorashada Abiy Ahmed in ay tahay khatarta Covid-19 ayaa ku jawaabay in aanay jirin khatar weyn oo hadda Itoobiya uu ku hayo ( Covid-19 ) isaga oo sabab uga dhigay in dadku ay codayn karaan iyaga oo taxadiraya si la mid ah sida hawl- maalmood-
koodaba ay u qabsadaan wakhti xaadirkan.
” Abebe Gellaw su’aashaas aad I weydiisay waa mid muhiim ah,laakiin wali inta aanan kaaga jawaabin ayaa waxa aan marlabaad kuu sheegayaa fudaydka Abiy Ahmed.
Waxa jiray xidhiidh aan toos ahayn oo uu waday Melez Zenawi oo ahaa in uu xaaladda Somaliland usoo bandhigo Ururka Midoowga Afrika,waayo ilaa hadda ma jirto go’aan kale oo aan ahayn ka soo noqoshada midoowgii ay la galeen Somalia oo ay aaminsanyihiin dadka Somaliland.Siyaasadda Ra’iisal Wasaare Zen-
aan Somalia,markaas ma jirto sabab aan u heshiisiinayno Somaliland iyo Somalia,laakiin waxa aan kor u qaadnay xidhiidhka Itoobiya iyo Somaliland oo hadda hadii aan runta kuu sheego uu Ra’iisal Wasaarahan uu dhulka dhigay xidhiidhkaas.
Inta aanu heshiisiin ha soo barto in ay laba wadan kala ahaayeen Somaliland iyo Somalia,hana soo barto taariikhda labada wadan.
Waxa kale oo la ii sheegay in uu yidhi waxa aan heshiisiinayaa North Korea iyo Japan! Dadkiisa ku dhaqan gobolka Oromia waxa ay hadda u bixiyeen ( Marata ) oo ah af Oromo macnaheedana ay tahay (Ninkii Maskaxda ka waalnaa )”.
Note: Waraysiga waxa qaaday Abeba Gellaw oo ka tirsan VOA Amhara,waxana aan ka soo qaadanay inta ugu muhiimsan.
Waxa Baahisay: VOA (AMHARIC )
Waxa Turjumay: Axmed Aadam